Hambalyo Hambalyo, SBC Tv oo Si rasmi ah Hawada u soo galay – SBC
Hambalyo Hambalyo, SBC Tv oo Si rasmi ah Hawada u soo galay
Posted by Webmaster on June 12, 2015 Comments
HAMBALYO, Maamulka Guud ee Warbaahinta Caalamiga ah ee SBC ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah uu hawada u soo galay Television-ka SBC, oo laga daawan doono Dunida Inteeda badan, isagoo fadhigiisu noqonayo magalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ee Puntland.
Tv-ga Sbc ayaa la asasaay sandkii 2002 isagoo ku shaqeynayay Qaab Cable ah, waxaana la casriyeeyay oo qaab lookal ah loo bedelay sanaddii 2006, isagoo ka howlgalay magalooyinka Bosaso iyo Garowe.
Xiligan oo lagu jiro sanadka 2015 ayaa waxa uu Tv-gu si rasmi ah hada u galayaa isago ah heer caalami, aduunka oo dhanna laga daawan karo, Waxaana haatan uu si tijaabo ah ugu jiraa Satellite-ka ay inta badan ku jiraan Tv-yada Soomaalida ee loo yaqaan Thaicom,
Halkan ka daawo Muuqaalka Tijaabada ah ee Tvga SBC,
Agaasimaha guud ee SBC Maxamed Deeq Cabdalla ayaa u xaqiijiyay SBC Online in Saacadaha soo socda uu si rasmi ah tvgu u soo fuuli doono Shaashadaha Caalamka, waxaana uu intaasi ku daray in ka agaasime ahaan uu ku faraxsan yahay Dib u curashada Tv-ga SBC, una hambalyeynayo dhamaan Ummadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay dunida ka joogaan.
Agaasimuhu waxaa kale oo uu u ballan qaaday Bulshada In SBC Tv ay ka heli doonaan dhammaan Howlihii ay uga barteen ee uu qaban jiray sida Wararka, Barnaamijyada iyo wixii la mid ah.
Xiliga Dib u curashada Tv-ga SBC ayaa waxa ay ku soo aadeysaa Xaalado siyaadeed oo uu dalku marayo, iyo isku diyaarinta hiigsiga 2016 ee u degsan mustaqbalka Somalia.
Sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa xili maalmo kooban un ay ka xigto sanadguurada 14naad ee Warbaahinta SBC, laga soo bilaabo 2001 arkii la Aasaasay SBC.
SBC Waxay noqoneysaa warbaahinta Keliya ee ka jirta Somalia taas oo ay u dhameystiran yihin Adeegyadii warbaahineed, sida Radio, Tv And Web, kuwaas oo dhamaan ah Heer caalami oo caalamka oo dhan laga dhageysan karo lagana daawan karo.
Hambalyo Markale Dhamaan Aqrista yaasha, Daawadayaasha iyo Dhageystayaasha SBC